rng – Gaming Noodle
အဝလှနျမှုကွောငျ့ အသကျ (၂၃) နှဈနဲ့ အနားယူသှားတဲ့ ထိပျတနျး Esports Pro ကစားသမား
[Unicode] အဝလှနျမှုကွောငျ့ အသကျ (၂၃) နှဈနဲ့ အနားယူသှားတဲ့ ထိပျတနျး Esports Pro ကစားသမား အသကျ (၂၃) နှဈအရှယျသာရှိသေးပွီး ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး League of Legends ADC ကစားသမားမြား ထဲက တဈဦးဖွဈတဲ့ Uzi ဟာ Royal Never Give Up (RNG) က အားကိုးအားထားရတဲ့ အသငျးသားဟောငျးလညျး ဖွဈပါတယျ။ ယခုအခြိနျမှာတော့ Uzi ဟာ ကနျြးမာရေးပွဿနာမြားကွောငျ့ League of Legends Pro ဘဝကနေ အနားယူရတော့မှာဖွဈကွောငျးကို သူ့ရဲ့ Weibo စာမကျြနှာပျေါမှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။ Uzi ရဲ့ ပို့ဈအရတော့ သူဟာ အဝလှနျရောဂါကွောငျ့ အစားအသောကျမမှနျဖွဈနရေသလို အိပျရေးပကျြခွငျးမြား၊ ဖိအားမြား …
အဝလှနျမှုကွောငျ့ အသကျ (၂၃) နှဈနဲ့ အနားယူသှားတဲ့ ထိပျတနျး Esports Pro ကစားသမား Read More »
2020 ရဲ့ ပထမဆုံး Minor ပွိုငျပှဲ WePlay! Bukovel Dota2 Tournament Preview
[Unicode] 2020 ရဲ့ ပထမဆုံး Minor ပွိုငျပှဲ WePlay! Bukovel Dota2 Tournament Preview Dota Pro Circuit 2019-2020 ရဲ့ ဒုတိယ Major ဖွဈတဲ့ Bukovel Minor ကိုတော့ ဇနျနဝါရီ ၉ ရကျကနေ ၁၂ အထိ ကငျြးပမှာဖွဈပါတယျ။ ယူကရိနျးနိုငျငံ Bukovel မွို့မှာ ကငျြးပမှာဖွဈပွီး Time Zone က မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ၄ နာရီခှဲခနျ့သာ ကှာခွားတာမို့လို့ ပွညျတှငျး Dota2 ပရိသတျတှေ စောငျ့ကွညျ့ဖို့ လှယျကူစမှောပါ။ ပွညျတှငျး Dota2 Casting Page အကုနျနီးပါး ပွဖို့ရှိတဲ့အပွငျ eGG Network မှာလညျး ပွမှာမလို့ …
2020 ရဲ့ ပထမဆုံး Minor ပွိုငျပှဲ WePlay! Bukovel Dota2 Tournament Preview Read More »
အသင်း(၂) သင်းရဲ့ အရှုပ်အထွေးကြောင့် Dota2 ကနေ အနားယူသွားတဲ့ VG.Fade
[Zawgyi] Dota2ကစားသမားဘဝကနေ အနားယူသွားတဲ့ Vici Gaming ရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် Fade Vici Gaming ကို ဦးဆောင်ပြီး TI9 ကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Fade ဟာ Dota2ပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားကနေ အနားယူသွားခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၃ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ Fade ရဲ့ ဦးဆောင်မှုဟာ 2018-2019 Dota2season မှာ Vici Gaming ကို Stockholm Major နဲ့ Epicenter Major လို ပြိုင်ပွဲများမှာ အနိုင်ရစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့တဲ့ TI9 မှာ မျှော်လင့်ထားသလောက် အခြေအနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတော့ …
အသင်း(၂) သင်းရဲ့ အရှုပ်အထွေးကြောင့် Dota2 ကနေ အနားယူသွားတဲ့ VG.Fade Read More »
Dota2 ရဲ့ Feature တစ်ခု ဖြုတ်လိုက်ပြီးမှ ကစားသမားတွေတောင်းဆိုလို့ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရတဲ့ Valve
[Zawgyi] Dota2 ရဲ့ Feature တစ်ခု ဖြုတ်လိုက်ပြီးမှ ကစားသမားတွေတောင်းဆိုလို့ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရတဲ့ Valve Dota 2: ဂိမ်းထဲက မလိုတာတွေ ဖြုတ်ပစ်မယ်! ကစားသမားများ: ပြန်ထည့်ပေးပါ၊ ပြန်ထည့်ပေးပါ! Dota 2: အင်းပါ ပြန်ထည့်လိုက်ပြီနော်! :'( TI9 ပြိုင်ပွဲကြီး ကျင်းပတော့မယ့် ယခု သြဂုတ်လ အစမှာ Valve ဟာ Dota2update တစ်ခုကို ထုတ်ခဲ့ပြီး ဂိမ်းရဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ optional unit query panel ကို ဖြုတ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Update အသစ်ထဲမှာ အဲဒီ feature ကို ဖြုတ်တာက လွဲရင် တခြားဘာမှ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ Optional …
Dota2 ရဲ့ Feature တစ်ခု ဖြုတ်လိုက်ပြီးမှ ကစားသမားတွေတောင်းဆိုလို့ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရတဲ့ Valve Read More »